admin – Page4– HINTHADA UNIVERSITY
admin November 20, 2020 Announcements
admin October 5, 2020 Uncategory
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့ အခမ်းအနားကို Zoom Online Meeting ဖြင့်ကျင်းပရာတွင် တာဝန်ခံပါမောက္ခချုပ်၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်၊ စီမံ/ဘဏ္ဍာ(ဌာနမှူး)၊ သင်တန်းရေးရာဌာနမှူးနှင့်အတူ ၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့၊ မောင်တောမြို့၊ သက္ကေပြင်နှင့် သံတွဲမြို့တို့တွင်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား အနီးကပ်သင်တန်းပို့ချခြင်းနှင့် စာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်းများအတွက် သွားရောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ဂုဏ်ပြုခံ…
(၅-၁၀-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော ကမ္ဘာဆရာများနေ့ကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့် ဟင်္သာတတက္ကသိုလ်ရှိ ဆရာ၊ဆရာမများနှင့် ဝန်ထမ်းများအား ဆန်နှင့်ဆီပေးဝေလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ လစာနှုန်း(၄၁၈၀၀၀-၄၀၀၀-၄၃၈၀၀၀)မှ (၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)ထိ – ဆီ လစာနှုန်း(၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)မှ (၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)ထိ – ဆန် လစာနှုန်း(၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀)မှ (၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)ထိ – ဆန်၊ ကြက်ဥ တာဝန်ခံပါမောက္ခချုပ် ဆရာမကြီး ဒေါက်တာနီလာမြင့်ကလည်း ဆရာ၊ဆရာမများနှင့်…
admin October 2, 2020 Teaching
Hinthada University Best Research Paper Award SeminarResearch Journal June, 2019 Earthquake Geology of Sagaing Fault, Between Latitude 19ႚ, and 20ႚ, Pyinmana-Yaeni Area, Central Myanmar, Tun…
Hinthada University Research Journal Vol. 10, No.1, 2019 သိကြားတိုင်တေးထပ်နှစ်ပုဒ်မှ ဦးပုည၏ ကဗျာဉာဏ်ရည်၊ ဌေးဌေးရီ Download Now!292 Downloads Assessing the Impact of Climate Change and Natural Disasters on…
Hinthada University Research Journal Vol. 9, No.1, 2018 အာမနာကျောင်းအမ၏ ဆုတောင်းကဗျာမှ ဇော်ဂျီ၏အတွေးအမြင်၊ ဌေးဌေးရီ Download Now!300 Downloads အင်းဝခေတ်ဝတ္ထုစကားပြေအရေးအသားလေ့လာချက်၊ အေးအေးသန်း Download Now!249 Downloads ၁၆ ရာစု မြန်မာကျောက်စာအချို့မှ သက္ကတမွေးစားစကားလုံးများလေ့လာချက်၊ နီနီတင်…
Hinthada University Research Journal Vol. 8, No.1, 2017 ကြည့်ကန်ရှင်ကြီးမေတ္တာစာများလာဒေသအသွင်ကွဲစကားများ လေ့လာချက်၊ နီနီတင် Download Now!74 Downloads အလွမ်း အတွေးနှင့်စာဆို၊ မြင့်ကြည်သိန်း Download Now!88 Downloads Evaluating the Vocabulary Section of…
Hinthada University Research Journal Vol. 7, No.1, 2016 Optical Characteristics of Nickel Substituted Cobalt-Zinc Ferrites Studied by UV-VIS-NIR Spectrosocopy, Nway Nway Khaing et al. Download…
admin October 1, 2020 Teaching
Hinthada University Research Journal Vol. 6, No.1, 2015 Study on Humidity Sensitive Electrical Properties of Nickel Substituted Cobalt Zinc Ferrite for Humidity Sensor Application, Nway…
Hinthada University Research Journal Vol. 5, No.1, 2014 A Study on Microstructural and Electrical Characteristics of Mg (10 Mol. %) Doped CaCO3 Ceramics Films, Thin…
၂၀၂၀-၂၀၂၁ နိုင်ငံအကျိုးပြုသုတေသန Proposal Presentation
Facilities Quarantine Centre တွင် နေထိုင်သူများကို We Love Yangon လူထုအခြေပြု ပရဟိတအဖွဲ့မှ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်း ဟောပြောမှု
တည်ဆောက်ရေး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို လှည့်လည်ကြည်ရှု့စစ်ဆေးခြင်း
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်(၁၀၀)ပြည့် ရာပြည့်သဘင်အထိမ်းအမှတ် ဗဟိုအဆင့် ကဗျာပြိုင်ပွဲနှင့်ရသစာတမ်းပြိုင်ပွဲ
Kyat-Kone Village, Ywa-thar-gone Village Tract, Western part of Hinthada.
Copyright © 2021 HINTHADA UNIVERSITY – Powered by Hinthada University.